Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Trinidad na Tobago » Njem nlegharị anya Trinidad na-enye ume ọhụrụ na onye isi ọhụụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ gbasara Trinidad na Tobago
Onye Ọchịchị Njem Nleta Ọhụrụ nke Trinidad
Njem nlegharị anya Trinidad Limited (TTL) kwuputara ọkwa nhọpụta onye isi ọhụụ maka nzukọ a. Akpọrọ Kurtis Rudd ka ọ bụrụ onye isi ọhụrụ, na -amalite ụbọchị abụọ gara aga na Septemba 2, 20.
Nke a bụ otu n'ime oge kacha sie ike na akụkọ njem na njem nlegharị anya na Trinidad, ọ dịkwa mkpa idu ndú ọhụrụ iji jikọta ngalaba a.
Site n'ọchịchọ ndụ ya niile maka ụlọ ika na ịhụnanya na -enweghị atụ maka mba, Kurtis Rudd na -achọ mgbe niile ka ọ na -eje ozi n'ala amụrụ ya.
Rudd kwuru na ya dị mpako na -ebu ọrụ maka ịkwalite akụ njem nlegharị anya nke agwaetiti ahụ.
Kurtis Rudd na -eweta ihe karịrị afọ 25 nke ahụmịhe njikwa dị elu yana nnukwu ahịa, nkwukọrịta atụmatụ, na njikwa njikwa nke ga -enyere aka Njem nlegharị anya Trinidad dị ka ọ na-eme ka akụ na ụba njem nlegharị anya nke agwaetiti ahụ dị ọhụrụ. Nke a abụrụla otu n'ime oge kacha sie ike na akụkọ njem na njem nlegharị anya na Trinidad, ọ dịkwa onye ndu ọhụrụ mkpa ijikọ ngalaba a na ịkọwa ụzọ doro anya maka ịmalitegharị njem mba ofesi n'enweghị nsogbu.
Site n'ọchịchọ ndụ ya niile maka ụlọ ika na ịhụnanya na -enweghị atụ maka mba, Kurtis Rudd na -achọ mgbe niile ka ọ na -eje ozi n'ala amụrụ ya. Ọ jigidela ọtụtụ ndị isi nchịkwa yana ndị isi ụlọ ọrụ na -azụ ahịa mpaghara na Caribbean gụnyere Shell Caribbean, Prestige Holdings Limited, Courts Trinidad Limited, na Guardian Life.
N'ịnabata nhọpụta ahụ, Kurtis Rudd kwuru, sị: “Obi dị m ụtọ isonyere ndị dị iche iche na ndị nwere nkà Otu ndị njem na Trinidad Ebu ọrụ nke ịkwalite akụ pụrụ iche na njem nlegharị anya nke agwaetiti anyị na mba ndị ọzọ. Anyị nọ n'oge dị mkpa na mmepe nke ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Trinidad, ọ dịkwa anyị mkpa imekọ ihe ọnụ nke ụlọ ọrụ onwe na nke ọha iji nweta ohere ahịa dị n'ihu wee pụọ n'ọrịa a. Enwere m obi anụrị na m nwere ohere ka mụ na Board of Directors, nke Cliff Hamilton na -edu. Anyị nwere ihe ndabara ọma inwe onye nwere ụdị ahụmịhe ya na njem nlegharị anya ụwa niile ka ọ na -edu nzukọ a. ”
Maazị Rudd kwubiri, "Nke a bụ ọrụ nrọ m n'ezie, m na -atụkwa anya iso Mịnịsta na -ahụ maka njem, omenaala, na nka na ndị niile nwere mmekọ na ịkpụzi na ịkwalite atụmatụ mpaghara njem iji nweta nkwagide ogologo oge na uto yana mkpokọta. . ”
Onye gụsịrị akwụkwọ na kọleji Fatima, Kurtis Rudd nwere Master of Business Administration (MBA), General Management si Henley Management College, UK, ọ bụkwa onye nkuzi ukwu na UWI-ROYTEC. Ọ lụrụ maka afọ 25, Kurtis Rudd ejirila ndụ ezinụlọ jikọ ọrụ azụmaahịa ngwa ngwa ma bụrụkwa onye kwenyesiri ike n'ịhazi ndụ onwe onye na ọrụ aka ọrụ.
dan.pimental ekwu, sị:
September 23, 2021 na 09: 28
Ị ga -egosirịrị ụgbọelu ahụ akwụkwọ e biri ebi ma ọ bụ nke eletrọniki iji banye n'ụgbọ elu gị. Njedebe ya bụ ọmarịcha mmasị ndị njem nleta n'ebe ndị obodo nọ n'ọtụtụ ebe Caribbean.